मान्छे पुरातन समयका देखि समूहमा एकताबद्ध। आदिम शिकारी सँगै Hunted, किसानहरु फील्ड काम गरे। को सह-चलान के हो, तिनीहरूले थाहा थिएन। तर आफ्नो सम्बद्धता साथै सहकारी को आधुनिक विचार गर्न श्रेय हुन सक्छ।
सह-अप - यो के हो?
र ओपस "सँगै", "सँगै" - - "काम", "काम" "सहकारी" शब्द दुई ल्याटिन जरा सह आउँछ। तसर्थ, के सह-चलान को प्रश्न, संयुक्त कार्य र सहयोग रूपमा सरल अनुवाद मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साधारण परिभाषा जवाफ।
सह-अप - जीवन को विभिन्न क्षेत्रहरू मा सहयोगको लागि प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति एक सम्बद्धता छ। यो उत्पादन र मार्केटिङ, निर्माण र भवन सञ्चालन, सेवा र सामान खरीद र खपत पनि समावेश छ। एक स्वैच्छिक आत्म-वित्त र आत्म-व्यवस्थापन को खर्च मा विकास, पहिचान कानुनी निकाय को संघ।
यस सहकारी प्रत्येक सदस्य को इक्विटी को आधार मा सहकारी सम्पत्ति सिर्जना गरियो। संगठन को नतिजा नयाँ सम्पत्ति साझा एक लाभ हुन्छ। यस सहकारी एक peculiar सुविधा काममा हरेक सदस्य को भाग हुने मानिन्छ। पूर्व सेट विशिष्ट उद्देश्य संयोजन गर्न, एक साधारण कोष सिर्जना गरियो। यसलाई (शेयर) बनाउन मा सहकारी साझेदारी प्रत्येक सदस्य। एक सहकारी संलग्न जोखिम लागि जिम्मेवार द्वारा चलाउन शेयरधारकों, को लाभ वितरण गरिएको छ।
सहकारी को मुख्य प्रकार
विभिन्न मापदण्डको मा सहकारी को प्रकार खडा। गतिविधिको प्रकार द्वारा marginalize उत्पादन र उपभोक्ता सहकारी। तिनीहरूलाई बीच मतभेद के हुन्? उत्पादन लाभ लागि उत्पादन गतिविधिमा सहमतिलाई प्रत्येक सदस्य को अनिवार्य श्रम सहभागिता एक प्रकारको विशेषता द्वारा छ। यो साझेदारी योगदान मा श्रम सहभागिता को प्रतिस्थापन अनुमति। SKHPK (कृषि उत्पादन सहकारी) proliferated छन्।
उपभोक्ता सहकारी यस्तो सहभागिता वैकल्पिक छ। यस्तो संघ शेयरधारकों को आवश्यकता पूरा गर्न एक मुनाफारहित संगठनको रूपमा सिर्जना भएको छ। उपभोक्ता सहकारी छन् उपभोक्ता समाजमा (IN), कृषि सहकारी (SCC) र अन्य संघ सदस्य-शेयरधारकों।
धेरै प्रजाति प्रतिनिधित्व उपभोक्ता सहकारी को प्रकार। उपभोक्ता समाज - सबै को पहिलो। फारम नागरिक र कानुनी को शेयरधारकों प्रदान, कृषि र अन्य उत्पादनहरु को खरीद लागि संस्थाहरू आफ्नो उत्पादन र आवश्यक सामान को आपूर्ति खेती गर्न आवश्यक छ। सामान्य स्टोर र उपभोक्ता समाज एक चिन्न संक्षिप्त आफ्नो वितरण र महत्त्व बारेमा बोल्छ कि मा गरिएका छन्।
कृषि सहकारी मान्छे, अग्रणी निजी फारमहरु र कृषि उत्पादकहरु एकजुट। यस मामला मा व्यक्तिगत श्रम सहभागिता आवश्यक छ। SCC सँगै माली वा माली, कृषि उत्पादन प्रक्रियाहरु वा बेच्छ, आपूर्ति, बीमा वा उधारो मा लगे ल्याउँछ।
सह-अप शीर्षकमा गतिविधिहरु
सह-चलान को नाम बाट स्पष्ट यसको सदस्य आफ्नो सृष्टिको उद्देश्य र गतिविधि देख्न सकिन्छ। GSK गैरेज को मालिक मिलती, भवन अचल सम्पत्ति व्यवस्थापन व्यवस्थित, विला-निर्माण सँगै घरहरू र गर्मी कटेज को मालिक ल्याउँछ। आवास को लागि, आवास निर्माण, आवास र बचत सहकारी छन्। आवास र बचत सहकारी (सीसीपी) उधारो लागि गठन गरिन्छ। तिनीहरूले ब्याज ऋण को लागि बचत शेयरधारकों आकर्षित किसान, कृषि उद्यम र व्यक्तिगत फारमहरु वित्तीय सहयोग उपलब्ध। कार्य संयोजन एक स्वैच्छिक सम्झौता सदस्य-शेयरधारकों को आधार मा प्रदर्शन गर्दै छन्।
सहकारी अन्य प्रकार
subdivided र अन्य मापदण्ड लागू सहकारी गर्न सकिन्छ। साझा प्रकार अवस्थित सह-चलान? एक निश्चित जवाफ दिन लक्षण इंटरलाकिंग प्रजाति को विशेषता विविधता संग साथ समानता निम्त्याउँछ रूपमा गाह्रो। जारी धेरै ठूलो ब्लक।
कानुनी स्थिति। सहकारी औपचारिक (कानुनी रूपमा दर्ता) र अनौपचारिक। सुरुमा, संगतले व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्ध कायम छैन। आज, सहकारी जहाँ, राज्य शरीर को नियमहरू लिपिबद्ध छन् देश को कानून अन्तर्गत सञ्चालन।
सहकारी को हाइरार्खीमा स्थिति। प्राथमिक, माध्यमिक, tertiary, र यति मा भेद। तिनीहरूले संरचना गठन भिन्न। प्राथमिक वृद्धि मा गठन व्यक्तिहरूलाई प्राथमिक देखि माध्यमिक छन्, र त्यसपछि।
स्थान द्वारा। यो सुविधा शहर, क्षेत्रीय ग्रामीण र अन्य सहकारी characterizes।
घटना को समय। संयोजन पुराना ग्राहक सन्तुष्टि, आधुनिक, एक अनुसन्धान दृष्टिकोण संग आधारित प्राथमिक आधार, परम्परागत मा सुरु।
गतिविधि को परिमाण। शेयरधारकों को संख्या, कवर क्षेत्र, को मात्रा: सानो, मध्यम, ठूलो संगठन फरक मापदण्ड द्वारा प्रतिष्ठित छन् आर्थिक गतिविधि।
अस्तित्वको समय। को सहमत शब्द वा अनिश्चितकालीन सिर्जना सहकारी।
गतिविधि क्षेत्र। उत्पादन सहकारी मूर्त र intangible लाभ। पूर्व कृषि र उद्योग, परिवहन सेवा र सामान बिक्री को उत्पादन, tailoring र थप समावेश गर्नुहोस्। कि सेवाहरू यस्तो स्वास्थ्य हेरविचार रूपमा प्रदान ती रूपमा दोस्रो श्रेणीका।
सदस्यहरूको सामाजिक संरचना। Proletarian अडान, कालिगढ र किसान सहकारी। पहिलो उत्पादन र बजार उत्पादन, ऋण बनाउन र जम्मा लिन दोस्रो र तेस्रो संयुक्त निर्माताहरु को प्रयासको सदस्यहरूको जीवित अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर। त्यहाँ जाति र vsesoslovnye आधार को संगतले थिए।
समारोहहरुमा को जटिलता अनुसार। व्यापार व्यवस्थापन उद्देश्य साधारण लक्ष्य लागि संगठन, चुनौतीहरू यूनियन संयुक्त काम व्यवस्थित।
एक विशेष उद्देश्य सहकारी हासिल सेट कुनै पनि सामाजिक आन्दोलन जस्तै। के महत्त्वपूर्ण छ इच्छित लक्ष्य को आधार छ? , संगठनात्मक शैक्षिक, आर्थिक, कानुनी र शैक्षिक गतिविधि सहयोग को विचार बढवा दिन्छ। जीवनको आर्थिक पक्षमा लाभदायी प्रभाव मार्फत आपसी कानुनी संस्कृति र पदोन्नति सुधार, मान्छे, सहकारी समृद्धि गर्न संयुक्त प्रतिबद्धता एकजुट हासिल छ नागरिक पहल।
सहकारी को सुविधाहरु संयोजन
साथ characterizing सहकारी, प्रकार विशेषताहरु र सुविधाहरू विशेषता छन् संग साझा विशेषताहरू छन्। उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीको संयोजन को महत्वपूर्ण संकेत देखाए। यी समावेश:
निजी सदस्यता सहभागीहरू;
आर्थिक लक्ष्य को समझ;
आपसी सहयोग ध्यान;
निःशुल्क प्रवेश निस्कन;
पहिलो स्थान मा सहकारी सदस्यहरू आवश्यकता हो;
सहकारी मा शेयरधारकों असीमित नम्बर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ;
संघ व्यवस्थापन आधारमा हुन्छ;
सदस्य, शेयरधारकों को उद्यम को व्यवस्थापन भाग;
घटक तत्व - मान्छे।
आधुनिक सहकारी को साधारण संकेत
सहयोग को बीस-प्रथम शताब्दीमा विकास साधारण नयाँ सुविधाहरू को उद्भव गर्न नेतृत्व गरेको छ। परम्परागत संकेत परिवर्तन सार परिवर्तन भएन।
मुख्य विशेषता: मात्र सहकारी लागि आर्थिक र सामाजिक गतिविधिहरु को जडान द्वारा विशेषता छ। सफल आर्थिक समारोह, सहकारी (शिक्षा प्रकार फरक हुन सक्छ), एक लाभदायक यसको सदस्यहरूको सामाजिक स्थिति मा प्रभाव छ।
थप सुविधा: संयुक्त स्वामित्व सम्पत्ति को। साधारण सम्पत्ति को गठन प्रवेश शुल्क र अतिरिक्त योगदान कारण हो। प्रवेश शुल्क यसलाई सहमतिलाई भौतिक आधार सिर्जना मा खर्च छ, फिर्ता छैन। थप साझेदारी चाहेको वा अनुसार यस विधान को प्रावधान संग मा स्थापित प्रविष्टि। दुवै प्रजाति आवर्तक हुन मानिन्छ। को लाभ आय र लागत सहकारी बीच फरक रूपमा गणना गरिएको छ। यसलाई जो सामान्य बैठक यसलाई वितरण गर्ने शेयरधारकों, पर्छ। घाटा साधारण मानिन्छ।
एउटा महत्त्वपूर्ण साधारण सुविधा आर्थिक गतिविधिको परिणाम लागि सबै सदस्यहरु को संयुक्त दायित्व मा प्रदर्शन गरिएको छ। संघ र लेनदारों को दाबी पूरा गर्न सामान्य धन को कमी को दिवालियापन को मामला मा, शेयरधारकों 'धन हुन्छन्। सीमित दायित्व हिस्सेदार संग योगदान को शेयर, वा यसको आकार को एक धेरै छ जो रकम दिन्छिन्। असीमित दायित्व सहकारी सदस्य यसको गतिविधिहरु को परिणाम को लागि आफ्नो सम्पत्ति संग प्रतिक्रिया आवश्यक छ।
अर्को सुविधा - लोकतांत्रिक सिद्धान्तहरू। सहकारी नेतृत्व मा लोकतन्त्र शेयरधारकों को मात्र सामान्य बैठक, सर्वोच्च परिचालक निकायको कार्य छ भन्ने तथ्यलाई मा प्रकट गर्नुभयो। मध्यवर्ती उप सभामा निर्वाचित गरिनेछ, उहाँलाई रिपोर्ट। यस सहकारी सदस्यहरू को समानता संख्या paov बिना एक मत स्वामित्वमा छ।
त्यसैले, के सहकारी अप योग। नागरिक यस स्वैच्छिक संगतिले, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरू आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न स्वायत्त र लोकतान्त्रिक सिद्धान्त एकताबद्ध। आर्थिक गतिविधि को हृदय मा कम्पनी को एक संयुक्त स्वामित्व छ।
युरोप मा सह-सञ्चालनको इतिहास
के सहकारी को क्लासिक अर्थमा पहिलो संघ बेलायतमा मध्य-उन्नाइसौँ शताब्दीमा देखा परे। अनुभव बुनकर 1830 असफल भयो। 1844 मा, आफ्नो दोस्रो प्रयास सफल भएको थियो। बीस-आठ बुनकर को कम मूल्यहरु मा शेयरधारकों पोषण उत्पादनहरु प्रदान गर्ने एक दोकान सिर्जना गर्न सँगै banded। 1949 मा, सदस्यहरूको संख्या नौ मानिसहरूलाई बढेको छ। सफल अनुभव निम्न त्यहाँ बीमा कम्पनी, निर्माता सहकारी, आपसी समाज थियो। बेलायत मा, उपभोक्ता सहकारी यूनियन हजारौं मा सात लाख मान्छे संयोजन। तिनीहरूले कानुनी र चिकित्सा सेवा को लागि आवश्यकता पूरा गर्न उपभोक्ता उत्पादनहरु र वस्त्र, घरेलू सामान र प्रस्ताव सेवाहरू आपूर्ति। यूरोप त्यस्तो देश हितमा र यसको बासिन्दा प्रत्येक लागि सह-चलान बुझ्छु। स्वीडेन मा, उपभोक्ता सहकारी आवास निर्माण, कृषि विकास आफूलाई सिद्ध गरेका छन्। डेनमार्क मा, 2000 मा वयस्क जनसंख्याको आधा उपभोक्ता सहकारी संयुक्त। सहयोग किसान विस्तार। दूध उत्पादन, मासु प्रशोधन र सहकारी आबद्ध अधिक।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सहकारी मा व्यवस्थाको 1926 मा ग्रहण पछि सहकारी रूपमा किसानहरु को व्यापक यस्तो संगतले, हुन्छन्। किसान सहकारी खेती गर्न सेवा बताए कस्तो लाभ यो प्रदान गर्दछ, सहयोग, के छ। बीस-पहिलो शताब्दीको शुरुवात भएको सहकारी आन्दोलन स्वयंसमर्थता पुष्टि गरेको छ। मिति, किसानहरु को आधा सह-चलान समावेश।
रूस मा सहकारी
रूस मा सहकारी आन्दोलन को विकास को इतिहास उन्नाइसौँ शताब्दीमा सुरु। पहिलो ऋण र क्रेडिट साझेदारी 1865 मा कोस्ट्रोमा क्षेत्रबाट Luginin भाइहरूलाई सिर्जना गरियो। प्रारम्भिक बीसौँ शताब्दीका द्वारा, रूस सहकारी र आफ्नो सदस्यहरु को संख्या मा दुनिया मा एक अग्रणी स्थिति लिएको छ। 1917 को घटनाहरू सहयोग को अगाडी विकास अवरोध। पुनरुद्धार को नब्बे को दशक मा सुरु भयो। व्यवस्था "रूसी संघ मा उत्पादन सहकारी गतिविधि मा।" - 1992 मा "रूस मा उपभोक्ता सहयोग मा" व्यवस्था 1996 मा अपनाए यी संघीय व्यवस्था साथै सहकारी रूसी संघ को नागरिक कोड द्वारा शासित छन्। प्रत्येक समाज विकास र जो बाहिर (आफ्नो जिम्मेवारी सदस्यहरू सहभागी, आदि, शेयर योगदान) संस्थाको आधारभूत नियन्त्रण सेट गर्दछ चार्टर, को सामान्य बैठक मा लिन्छ। आज, रूस मा सहकारी संख्या, सहभागी संख्या बढिरहन्छ।
यस सहकारी आन्दोलन को विकास को लागि संभावनाहरु
बीस-प्रथम शताब्दीमा शामिल परम्परा जारी छ। हामी अवधारणा र सहकारी को प्रकार परिवर्तन, तर आफ्नो सार एउटै रहनेछ। को सत्तरी भन्दा बढी हजार आधुनिक सहकारी को सय बीस प्रजाति पहिचान गर्न सकिन्छ। प्रजाति विविधता सहकारी फरक सामाजिक-आर्थिक अवस्थामा महत्त्वपूर्ण संकेत सहकारी सदस्य मा सुधार को लागि आफ्नो आशा सम्म बस्नुहुन्थ्यो सुझाव।
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा परिवहन कम्पनीहरु: सूची र वितरण पटक
कार्यालय कार्यालय कसरी प्रदान गर्नुपर्छ
सही निपटने को लागि उदाहरण लक्ष्य यात्राको
निजी कम्पनीहरु: आफ्नो गतिविधिहरु को संगठन को सार र आधारभूत सिद्धान्तहरू
राष्ट्रिय विकास कम्पनीहरु। एक अचल सम्पत्ति विकास कम्पनी के हो?
एक ढोका बिस्तार आफ्नै हातले निर्माण गर्न सकिन्छ
वाक्यांशको अर्थ र उत्पत्ति "जस्तै पानीको दुई बत्ती"